Ahoana ny fivoaran'ny fitondran-tena amin'ny fiantsenana sy fandefasana an-tserasera amin'ny 2015 | Martech Zone
Ahoana ny fivoaran'ny fitondran-tena amin'ny fiantsenana sy fandefasana an-tserasera amin'ny 2015
Alakamisy, Jona 4, 2015 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Any Chicago aho no IRCE ary mankafy tanteraka ny hetsika. Goavana tokoa ny fampirantiana ka tsy azoko antoka fa hamakivaky ilay hetsika manontolo aho nandritra ireo andro roa nahatongavako teto - misy orinasa mahatalanjona hosoratanay. Ny fifantohana tanteraka amin'ny adala amin'ny valiny refesin'ny mpampiranty rehetra eto dia mamelombelona ihany koa. Indraindray rehefa manatrika hetsika ara-barotra hafa aho, ny sasany amin'ireo fotoam-pivoriana sy fifantohana dia toa miala amin'ny orinasa tena mila mahazo valiny ara-bola.
Omaly dia nanatrika fivorian'ny UPS aho Gian Fulgoni, filoham-pirenena sady mpiara-manorina ny comScore izay namoahan'ny UPS ny taona isan-taona UPS Pulse an'ny mpivarotra an-tserasera (rohy eo ankavanana ambony ireo antontan-taratasy) ary asehon'ny fandinihana fa ny fanovana tarehimarika indroa amin'ny fitondran-tena miantsena an-tserasera dia mitohy hatrany ny fanao.
Hevitra misongadina ao amin'ny UPS Pulse an'ny Online Shopper
Miantsena kely sy eo an-toerana - Vaovao amin'ny fianarana amin'ity taona ity, ny ankamaroan'ny mpanjifa (93%) miantsena amin'ny mpivarotra enta-madinika. 61% no niantsena tany amin'ireny toerana ireny satria manome vokatra tsy manam-paharoa, 49% no tsy nahita izay nilainy tamin'ny magazay nentin-drazana ary 40% no te-hanohana ny vondron'orinasa kely.
Shopping Global - Ho fanampin'izany, 40% ny mpanjifa no nividy tamina mpivarotra antsinjarany any ivelan'i Etazonia, miaraka amin'ny antsasaky ny (49%) mitatitra fa nanao izany izy ireo mba hahitana vidiny tsara kokoa, ary 35% no nilaza fa te hanana entana izay tsy hita ao amin'ny magazay amerikana.
Herin'ny Media sosialy - Mpanjifa maro no mifandray amin'ny hetsika miantsena amin'ny alàlan'ny media sosialy miaraka amin'ny tatitra 43% fa mahita vokatra vaovao amin'ny tranokala media sosialy. Facebook no fantsona manan-kery be indrindra fa ny mpiantsena koa dia mandray ireo tranonkala mifantoka amin'ny fahitana toa an'i Pinterest.
Digital Commerce - Mitohy mivoatra ny fivarotana antsinjarany satria mihevitra ny hampiasa teknolojia finday any am-pivarotana ny mpiantsena sasany amin'ny Internet: 33% no mahasarika ny labozy elektronika, 29% no nilaza fa handinika ny fizahana finday, ary 27% no nilaza fa misokatra hampiasa efijery mikasika izy ireo hahazoana vaovao, hividy. na mandamina fanaterana.
Maimaim-poana ny fandefasana - Ny fandefasana maimaim-poana dia mijanona ho safidy manan-danja indrindra mandritra ny fizahana arakaraka ny 77% amin'ireo mpividy an-tserasera. Maherin'ny antsasaky ny (60%) no nanampy entana tamin'ny kalesiny hahafeno fepetra amin'ny fandefasana maimaim-poana. Ny fandinihana dia manome fahitana hanampiana ireo mpivarotra hampitombo ny varotra - 48% amin'ireo mpiantsena an-tserasera no nilaza fa mandefa entana any amin'ny magazay, miaraka amin'ny 45% amin'ireo milaza fa nanao fividianana fanampiny rehefa naka ny baikony.
Fiverenana tsy misy olana - Araka ny tatitra, 62% amin'ireo mpanjifa ihany no afa-po amin'ny fizotry ny fiverenana an-tserasera: 67% no mamerina mijery ny politikan'ny fiverenan'ny mpivarotra alohan'ny hanaovana fividianana, 66% no mila fandefasana maimaimpoana, 58% maniry «tsy misy fanontaniana apetraka» maimaimpoana. politika famerenana, ary 47% dia mila mari-pamantarana mora miverina.
Fanaterana hafa - Raha ampitahaina amin'ny fandinihana tamin'ny herintaona, maro ny mpanjifa no misokatra amin'ny safidy hafa. Tamin'ny 2014, 26% no nilaza fa aleon'izy ireo alefa any amin'ny toerana hafa ankoatry ny tranony ny fonosana, tafakatra 33% izany tamin'ity taona ity. UPS aza dia mizaha toetra pickup locker-service any amin'ny tanàna sasany amin'izao fotoana izao.
Fandraisana an-tsena - Manakaiky ny antsasak'adiny (48%) amin'ireo mpividy an-tserasera no nampiasa sambo hitahiry nandritra ny taona lasa, ary 45% amin'ireo mpanjifa ireo no nanao fividianana fanampiny rehefa naka ny fividianana an-tserasera.
Lohahevitra iray niadian-kevitra nahaliana ahy indrindra: ny mpanjifa ovao ny fantsona miantsena eo amin'ny finday sy ny birao. Ny taham-panovana finday dia mbola latsa-danja be ihany eo amin'ny birao. Ny tombana dia taham-panovana finday 0.5% hatramin'ny tahan'ny fiovam-po 3% amin'ny birao. Tsy midika izany fa ny mpanjifa dia tsy miova fo… Matetika izy ireo dia miova eo anelanelan'ny roa. Raha ny marina dia nanambara Andriamatoa Fulgoni fa ny haben'ny viewport lehibe amin'ny finday vaovao toa ny iPhone 6+ dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny fiakarana kely amin'ny haben'ny fifanarahana fandaniana amin'ny finday sy ny tahan'ny fiovam-po.
Ireo mpivarotra antsinjarany dia mila manohy mandroso ny rindranasa findainy, satria 38% izay manana fitaovana finday nefa tsy mampiasa azy io hividianana fividianana dia nilaza fa tsy lehibe na mazava tsara ny sarin'ny vokatra, ary 30% no nilaza fa sarotra ny mampitaha ny vokatra.
2015 pulsa UPS ny taratasy fotsy an'ny mpivarotra an-tserasera - An-trano
2015 UPS Pulse an'ny fandalinana mpanatanteraka amin'ny Internet Shopper - An-trano
Tags: FacebookFree deliveryonline shoppingPinterestFandefasanaUPS
Farany - loharanom-pahalalana hitazomana tsara ny haino aman-jery sosialy!
Fandraisana an-tsary ICRE mahatalanjona avy amin'ny Ink Factory Studio
Sep 14, 2015 amin'ny 8: 51 AM
Misaotra betsaka tamin'ny fizarana ity vaovao sy antontan'isa mahafinaritra ity!